Nye ụgbọ ala - BullyingCanada
Bụrụ onye ọrụ afọ ofufo
Inye ụgbọ ala
Nnukwu onyinye & nchekwa
Hapụ Ihe nketa Na-agaghị echefu echefu
Nye ugbu a
na-enye ụmụaka na-emegbu mmadụ
24/7/365 netwọk nkwado
chọrọ nkwado gị Kwado Ọrụ Anyị Dị Mkpa Imesapụ aka gị na-azọpụta ndụ Sonye Ị nwere ike inye aka BullyingCanada na-adabere na ndị na-emesapụ aka
nkwado nke ndị mmadụ dị ka gị.
Kwado anyị. Chekwaa ndụ.
Ndị enyemaka dị ka gị na-akwado nkwado anyị dị oke egwu.
Ọtụtụ iri puku ndị ntorobịa n'ofe obodo ahụ na-adabere na ya BullyingCanada iji nyere ha aka nwetaghachi nchebe site n'aka ndị na-emegbu mmadụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo ọ bụla.
24/7 netwọk nkwado mba niile maka ndị ntorobịa emegbu.
Olu ndị ntorobịa
Ọmụmụ ihe obodo na-emepụta uche mepere emepe ma chebe ụmụaka.
Usoro Ọmụmụ Ihe
Ọmụmụ ihe na-enyere ndị ntorobịa aka ịghọ ndị isi obodo.
Olu maka ndị ihe metụtara
Na-akwado ike na-agwụ ike maka ndị a na-emegbu ndị ntorobịa.
Oge ọ bụla bara uru
nyere anyị aka ịza oku nhụsianya maka enyemaka
afọ nke ije ozi
na-eti mkpu enyemaka na 2020 site na ekwentị na ederede
na-eti mkpu enyemaka na 2020 site na nkata ndụ na email
ọbịa na BullyingCanada.ca na 2020
Ị nwere ike ịtụgharị ụgbọ ala gị na-achọghị ka ọ bụrụ onyinye na-emesapụ aka iji kwado iji ike emegbu Canada! Na-arụ ọrụ na nnọchite anyị, Onyinye ụgbọ ala Canada ga-anabata ụgbọ ala gị maka onyinye - na-agba ọsọ, ma ọ bụ na ọ bụghị. Ochie ma ọ bụ ọhụrụ!
Enweghị ụgwọ ọ bụla maka gị, usoro a dịkwa mfe nke ukwuu! Inye ụgbọ ala Canada ga-eme ka akụkụ niile nke onyinye ụgbọ ala gị dị mfe site na mbuli ruo n'ahịa ikpeazụ, hụ na a ga-ere ụgbọ gị maka nsonaazụ ire kacha elu enwere ike. Ha na-ezigara anyị ihe ha nwetara n'ụgbụ ahụ na Bullying Canada, anyị na-eziterekwa gị akwụkwọ ụtụ isi maka uru ụgbọ ala ahụ. Wepụ ụgbọ ala ahụ na-achọghị taa!
Ụzọ ndị ọzọ iji kwado BullyingCanada
Na mgbakwunye na inye ihe n'ịntanetị, e nwere ụzọ ole na ole isi kwado ọrụ nzọpụta anyị.
Daalụ ndị na-akwado anyị bara uru, na-emesapụ aka!
Ịkwado anyị site n'ịkwalite ego nwere ike ịdị mfe ma na-atọ ụtọ!
Mmekọrịta ụlọ ọrụ nwere ike ịbara ha abụọ uru BullyingCanada na azụmahịa gị!
Nnukwu onyinye na-enye ike BullyingCanada ime ihe ọzọ!
Ụgbọ ala ndị a na-achọghị na-atụgharị ghọọ nkwado mmesapụ aka!
Inye ihe nketa
Hapụ ihe nketa na-agaghị echefu echefu ma kwado ndị ntorobịa maka ọgbọ ndị na-abịa!
Nweta Enyemaka Ugbu a—Ọ bụghị Nanị Gị
24/7/365 nkwado site na ekwentị, ederede, nkata, ma ọ bụ email
Nweta Enyemaka Ugbu a
A na-akparị gị?
Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na nkwado gị?
Jikọọ ihe ọhụrụ BullyingCanada
(877) 352-4497 ekwentị
amụma nzuzo | Usoro ojiji | Ngwa Mgbasa ozi & Ntuziaka ika
Nwebisiinka 2006-2022. BullyingCanada, Inc. Ikike niile echekwabara. | Nọmba ndebanye aha ebere: 82991 7897 RR0001.
Mepee ogwe ngwaọrụ
Nnukwu ihe mgbanwe
Ọ dị iche na nke na-adịghị mma
Nweta njikọ n'okpuru